fampiharana poker bonus senza deposito
Ny Minisitry ny fitantanam-Bola ho an'ny Litoania, Vilius Šapoka dia mizara ny fijeriny momba ny fomba mandroso-misaina sy namana lalàna, ankoatra ny mety foto-drafitrasa afaka manafaingana ny fananganana ny blockchain teknolojia ho an'ny fivoaran'ny firenena ary manome ny fomba fijery momba ny lalàna avy amin'ny Vondrona Eoropeana fampiharana ny isan-mandidy ao jery mitongilana ny slot machine.
Ity fihaonana an-tampony karakaraina miaraka amin'ny Indoneziana Blockchain Association (ABI) sy XBlockchain fampiharana poker bonus senza deposito. Tambajotra fivoriana hotontosaina mandritra ny 2 andro ny fihaonana an-tampony ao anatin'izany ny manasa-irery ihany no avo lenta fivoriana naka toerana ihany koa ny antsoina hoe Blockchain ny Yacht tampon'ny ny Bali ranomasina.
Miaraka amin'ny tambajotra midadasika be iraisam-pirenena sy ny mpiara-miombon'antoka eto an-toerana, XBlockchain mampiroborobo ny fifampiresahana sy fiaraha-miasa, ary manome misokatra zava-baovao sehatra mba hifandray ary marisika ny tsirairay, mpandraharaha, ny startups, ary nanorina ny fikambanana, ny sampan-draharahan'ny governemanta sy ireo mpampiasa vola izay mikatsaka ny hanome ny fanahy ny tsara fanelingelenana eo amin'ny sehatry ny blockchain dia seneca allegany casino mikatona. Miteny ny fihaonana an-tampony dia ahitana Susan Oh ny Firenena Mikambana' Blockchain ho Fiantraikany, Inge Halim ny IBM Indonezia, i Paoly Fahotana ny Deloitte ao Azia-Pasifika Blockchain Lab, Chia Hock Lai Singapore Fintech Fikambanana sy ny maro hafa avy any ETAZONIA, Eoropa, Aostralia sy ny faritra Azia. Ny XBlockchain fihaonana an-Tampony 2018 izay maka toerana ao amin'ny oktobra 9-10, ny herinandro ihany sy ny toerana toy ny amin'ity taona ity ny FMI-WBG fivoriana fanao isan-taona, dia hampiantrano adihevitra amin'ny global ireo mpitarika avy ao amin'ny Firenena Mikambana, IBM, Deloitte, Kintana, Pundi X, sy mitarika blockchain solontena sy ny manam-pahaizana avy isan-karazany any Azia indostria, ny firenena sy ny governemanta dia seneca allegany casino misokatra.
Mpandraharaha nivadika ho mpanao lalàna Jason Hsu Taiwan dia miresaka momba ny Toetry Ny Nomerika toe-Karena, Blockchain, sy ny Fitsipika amin'ny maha-izy mitaona avy be dia be ny fototra ao amin'ny fametrahana ny politikan'ny, rehefa nanoratra toy izany ny lalàna ho toy ny Fintech Sandbox Fihetsika sy ny Anjely Fampiasam-bola Lalàna. Momba Xblockchain Ao amin'ny fitokanana ny taona, XBlockchain dia nanao ny trano ny faritra nanan-kery indrindra ho an'ny sehatra blockchain mpitondra hevi-baovao.